တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ နှာခေါင်းစည်းသုံးပြီး တချို့ဘာကြောင့် မသုံးတာလဲ
တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ နှာခေါင်းစည်းသုံးပြီး တချို...
27 มี.ค. 2563 - 18:48 น.
ဝူဟန်နဲ့ ကွမ်ကျိုးမှာ နှာခေါင်းစည်း မတပ်ရင် ဖမ်းမယ်လို့ ရဲကပြော
ဟောင်ကောင်၊ ဆိုးလ် နဲ့ တိုကျို မြို့တော်တွေမှာ နှာခေါင်းစည်း မတပ်ဘဲ အိမ်ပြင်ထွက်တာနဲ့ လူတွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြည့်ရှုတာ ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု စတင် ကတည်းက တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ နှာခေါင်းစည်းကို သုံးဖို့ အပြည့်အဝ တိုက်တွန်းကြပြီး နှာခေါင်းစည်း မတပ်သူဟာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက အပယ်ခံရတော့မယ့်သဖွယ် ဆက်ဆံခံရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်၊ ယူကေ နဲ့ သြစတြေးလျက ဆစ်ဒနီ လို မြို့ကြီးတွေ အပြင် စင်္ကာပူ လို ကမ္ဘာ့နေရာ တချို့မှာတော့ ဒီလို နှာခေါင်းစည်း မပါဘဲ အပြင်ထွက် သွားလာတာကို လက်ခံကြပါတယ်။
အခုလို တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကျတော့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဖို့ ကြိုဆိုပြီး တချို့မှာ ဆန့်ကျင် ကြတာဟာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကြံပေးမှုတွေကြောင့်သာ မဟုတ်ဘဲ လူမှုသဘာ၀ တွေးတော ကျင့်ကြံတဲ့ ပုံစံနဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် Tessa Wong က ရေးသားထားပါတယ်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့က ဘယ်လို အကြံပေးလဲ
နှာခေါင်းစည်းတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါ လက္ခဏာ ပြနေသူတွေနဲ့ သံသယ လူနာတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေသာ တပ်ဆင်သင့်တယ်လို့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စတင်ကူးစက် ပျံ့ပွား ကတည်းက ကမ္ဘာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီ နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားသူ တယောက်ဟာ သူ့မျက်နှာ နားတဝိုက်မှာ ရောဂါပိုး ရှိသူက လာပြီး နှာမွှန် ချောင်းဆိုးတာမျိုး ကြုံရတဲ့ အခါမှ သူ့အတွက် အကာအကွယ် ဖြစ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲ
အဆိပ်ငွေ့ခန်းကြီးလို ဖြစ်လာတဲ့ ဒေလီမှာ နှာခေါင်းစည်း သန်းချီ ဝေခဲ့ရ
တကယ်တော့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်အစက်တွေနဲ့ ရောဂါပိုး ခိုအောင်းနေရာ ပစ္စည်းတွေ၊ မျက်နှာပြင်တွေကို ထိတို့ ကိုင်တွယ် မိရာကနေ ကူးစက် ပျံ့ပွားတာလို့ လတ်တလော ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ဒီနှာခေါင်းစည်း တပ်ရုံလောက်နဲ့ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုကို လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ် ပေးပုံ မရဘူးလို့ ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ကို မကြာခဏ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေနဲ့ဆေးတာက ပိုပြီး ထိရောက်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
မသန့့်ရှင်းတဲ့ လက်နဲ့ မျက်နှာပေါ်က နှာခေါင်းစည်းကို ဖြုတ်လိုက် တပ်လိုက် လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ချေ ရှိသလို ဒီလို နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားလိုက်တာနဲ့ ကူးစက်မှုက ကာကွယ်နိုင်ပြီ ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ တွေးခေါ် စဉ်းစားမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်းတပ်တာက တရုတ် အပါအဝင် အာရှမှာ တွေ့နေကျ မြင်ကွင်းလို ဖြစ်လာနေ
ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေဟာ လုံခြုံ စိတ်ချရတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အာရှ နေရာ တချို့မှာ အခုအခါ လူတိုင်း တပ်ဆင် သုံးစွဲ နေကြပါတယ်။
တရုတ် ပြည်မကြီး၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန် ထိုင်း၊ တိုင်ဝမ် တို့မှာ ဘယ်သူမဆို ကျန်းမာရေး ကောင်းတဲ့ လူတွေမှာတောင် ရောဂါပိုး ရှိနိုင်တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ရမယ်လို့ မှတ်ယူထားကြပါတယ်။
တချို့ အစိုးရတွေ ဆိုရင် လူတိုင်း နှာခေါင်းစည်း တပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေပြီး တရုတ် နိုင်ငံက တချို့ နေရာတွေမှာ ဆိုရင် နှာခေါင်းစည်း မပါသူကို ဖမ်းဆီး အပြစ်ပေး တာတွေ ရှိပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် တို့မှာတော့ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရပေမယ့် စစ်ဆေး အတည်ပြုမှု မရှိသေးတဲ့ အရေအတွက် အများအပြား ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သံသယ နဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ နှာခေါင်းစည်းတွေ စတင် တပ်ဆင်လာကြပါတယ်။
အရှေ့အာရှမှာ နေမကောင်းဖြစ်ရင် ဒါမဟုတ် ပန်း၀တ်မှုန်ကြောင့် မျက်ရည်ယို နှာစေးဖြစ်တဲ့ ရာသီတွေမှာ နှာခေါင်း ပါးစပ်တွေ မအုပ်ဘဲ ချောင်းဆိုး နှာချေတာမျိုးဟာ မသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့် လူတွေက နှာခေါင်းစည်း တပ်ကြပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာ နှာခေါင်းစည်း ပုံစံ မျိုးစုံ အရောင်အသွေး မျိုးစုံ ၀ယ်ယူနိုင်
၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက ဟောင်ကောင်မှာ SARS ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကြောင့် လူအများအပြား သေဆုံးခဲ့ရပြီး ဒေသတွင်းက တခြား နိုင်ငံ အတော်များများမှာလည်း ဒီရောဂါပိုး ကူးစက် ပျံ့ပွားကာ အဲဒီတုန်းက နှာခေါင်းစည်းတပ်တာဟာ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စ တခုလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အတွေ့အကြုံတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် အတိတ်က ခံစားခဲ့တာကို ပြန်လည် အမှတ်ရကာ နှာခေါင်းစည်းတွေ တပ်ကြတာ ဖြစ်ပြီး ဒီအချက်က အာရှ နဲ့ ဥရောပ က လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြား မတူညီတဲ့ အချက်တခုသဖွယ် ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရှေ့တောင်အာရှက လူနေ ထူထပ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ လေထု ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် လမ်းထွက်ရင် ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာရှ နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူမှာတော့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် လုံလောက်မှု ရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး နှာခေါင်းစည်းတွေကို မသုံးကြဖို့ အစိုးရက လူထုကို ပန်ကြားထားသလို လမ်းပေါ်မှာ လူအများစုဟာ နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားတာ မရှိပါဘူး။
လူထုကလည်း အစိုးရ အပေါ် အထိုက်အလျောက် ယုံကြည်မှု ရှိတာကြောင့် အခုလို လိုက်နာ ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းစည်း တပ်တာက ကျန်းမာရေး သတိပေးမှု ဖြစ်စေသလား
နေရာအနှံ့မှာ နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားသူတွေ မြင်ရခြင်း အားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အန္တရာယ်ကို သတိပေးသလို ဖြစ်စေပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သာမက တခြားသူတွေရဲ့ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စ မှန်သမျှကို အမူအရာနဲ့ နှိုးဆော်သလို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ တချို့က စောဒကတက် ပြောဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေကို ကျတော့ အကာအကွယ် ဖြစ်စေတယ် ဆိုပြီး နှာခေါင်းစည်းတွေပေး တပ်ခိုင်းတာ ဆိုတော့ ဒီ နှာခေါင်းစည်း တွေဟာ အသုံးမဝင်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်တဲ့ အကြောင်း ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ် ကူးစက်ရောဂါ ပျံ့ပွား ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပညာရှင် Benjamin Cowling က ပြောပါတယ်။
လူစုလူဝေး နေရာတွေမှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ သုံးရင် လူထုကြား ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သလို ထပ်တိုး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကူးစက်မှုတွေကို လျော့ပါးသွားစေတာပေါ့လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအခါ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ထိုင်း တို့မှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ ပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကြုံနေရပြီး တောင်ကိုရီးယားမှာ ဆိုရင်လည်း နှာခေါင်းစည်းတွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ ဝေငှ ပေးနေရပါပြီ။
သုံးပြီးသား မသန့်တဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေကို ပြန်လည် အသုံးပြုတာ၊ မှောင်ခိုစျေးကွက်မှာ ရောင်းတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ သုံးတာ၊ တချို့ ကိုယ့်ဖာသာ လက်ဖြစ် ထုတ်တဲ့ နှာခေါင်းစည်း သုံးတာဟာ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို စိုးရိမ်မှု ဖြစ်စေသလို ၊ ဒီလို လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ လုံး၀ အချည်းနှီးဘဲ ဆိုပြီး ပူပန်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
လူတိုင်း နှာခေါင်းစွပ် တပ်ထားခြင်းဖြင့် ကူးစက်မှု ကျန်းမာရေး အသိပေးသလို ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေ
ဟောင်ကောင်မှာ သတင်းစာ ဂျာနယ်နဲ့ စာစောင် တချို့ရဲ့ မျက်နှာဖုံး စာမျက်နှာမှာ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ နှာခေါင်းစည်း မတပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို မလှမပ ဖြစ်အောင် ချယ်မှုန်း ပြသထားပြီး ပြည်ပက လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ ခရီးသွားတွေဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အပြည့်အဝ မလုပ်ဆောင်ဘူးလို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ နှာခေါင်းစည်း တပ်သူတွေ့ရင် ရှုတ်ချကြသလို တချို့နေရာတွေမှာ ဆိုရင် နှာခေါင်းစည်း တပ်သူတွေဟာ အာရှ တိုက်သားတွေ ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်တာတွေတောင် ရှိပါတယ်။
အခုအခါ အရင်က ထင်မထားတဲ့ ကူးစက်မှုတွေအပြင် ကျန်းမာရေး ကောင်းတဲ့ လူတွေမှာတောင် လက္ခဏာ အနည်းအကျဉ်း ဒါမှမဟုတ် မပြသလောက်ရှိပြီး ကူးစက် ခံရတယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထား တချို့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
တရုတ်မှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ သုံးပုံတပုံမှာ လက္ခဏာပြတာ မရှိဘူးလို့ တရုတ် အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက် အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး South China Morning Post သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျပန် ယိုကိုဟားမား ဆိပ်ကမ်းက စိန်မင်းသမီး ဇိမ်ခံ သင်္ဘောပေါ်ပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ခြောက်ရာကျော်မှာ တဝက်လောက်က ရောဂါ လက္ခဏာ မပြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အလားတူ ရောဂါ လက္ခဏာပြသူ အရေအတွက်မများလှတဲ့ အိုက်စလန်မှာ တခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေထက် သူနိုင်ငံသားတော်တော်များများကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုလို လက္ခဏာ မပြဘူး ဆိုတာနဲ့ သူတို့မှာ ကူးစက်ရောဂါပိုး အများကြီး မရှိဘူးလို့ ယူဆထားမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတာကို မသိဘဲ နှာခေါင်းစည်း တပ်ထားသူတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဖြန့်သူ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား လို့ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
အင်္ကျီနဲ့ နှာခေါင်းစည်း ဆင်တူ ၀တ်ထားတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ကျန်အိုချာ
တရုတ်မှာ လတ်တလော ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လေ့လာချက် အရ စာရင်းမှတ်တမ်းထဲ မပါတဲ့ ကူးစက်ခံရသူတွေ ၊ ရောဂါ လက္ခဏာ လုံး၀ ဒါမှမဟုတ် အနည်းအကျဉ်းသာ ပြတဲ့ သူတွေကနေ အကြီးအကျယ် ကူးစက်ခဲ့ပြီး ၊ ကူးစက်မှုရဲ့ ရှစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးလောက်ဟာ သူတို့တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကတော့ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက် တခုသာ ဖြစ်ပြီး နောက်မှာ သုတေသန စာတမ်းတွေ အများအပြား ထွက်ပေါ်ကာ အားလုံးကို ခြုံကြည့်နိုင်မယ် အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း ဆိုတာဟာ ခေတ်သစ် သမိုင်းမှာ ကူးစက်မှု အကာအကွယ်ယူနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတခုအဖြစ် လက်ခံ ယူဆချက်သာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒီကပ်ဘေး ရောဂါဆိုးရွားလာတာနဲ့ အမျှ အထောက်အထား သုတေသန စစ်တမ်းတွေ ပိုမို ထွက်ပေါ်ကာ လူတွေရဲ့ ပြုမူ ကျင့်ကြံတာတွေလည်း ထပ်မံ ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် Tessa Wong က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ နှာခေါင်းစည်းသုံးပြီး တချို့ဘာကြောင့် မသုံးတာလဲ